ch2တမန်တော်ဝတ္ထု – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / တမန်တော်၏တမန်တော် / ch2တမန်တော်ဝတ္ထု
2:1 ထိုအပင်တေကုတ္တေတို့လက်ထက်၌ပြီးစီးသောအခါ, သူတို့ကနေရာတစ်ခုတည်းကိုအတူတကွအားလုံးခဲ့ကြသည်.
2:2 နှင့်ရုတ်တရက်, ကောင်းကင်ဘုံမှအသံ လာ., အကြမ်းဖက်ချဉ်းကပ်တဲ့လေတိုက်၏တူ, ထိုသို့သူတို့ထိုင်ကြဘယ်မှာတစ်ခုလုံးကိုအိမ်တော်ကိုဖြည့.
2:3 နှင့်သီးခြားလျှာသူတို့ကိုရှိသည်ထင်ရှား, မီးလျှင်အဖြစ်, သောသူတို့အဘို့အသီးအသီးတို့အပေါ်မှာအခြေချ.
2:4 ထိုသူအပေါင်းတို့သည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်နှင့်ပြည့်စုံခဲ့သည်. ထိုသူတို့ကအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားကို၌ဟောပြောစတင်ခဲ့သည်, သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်သူတို့ကိုအဟောအပွောကောငျးပေးသနားတော်မူ၏နည်းတူ.
2:5 အခုဆိုရင်ယေရုရှလင်မြို့၌တည်းခိုယုဒလူတို့ရှိခဲ့သည်, မိုဃ်းကောင်းကင်အောက်၌ကြောင်းကိုသောလူမြိုးထဲကကိုင်းရှိုင်းယောက်ျား.
2:6 နှင့်ဤအသံသည်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်သည့်အခါ, လူအစုအဝေးစုဝေးရောက်လာကြ၏နှင့်စိတ်တွင်ရှုပ်ထွေးခဲ့သည်, အသီးအသီးမိမိဘာသာစကားနဲ့စကားပြောသူတို့ကိုနားထောင်ပြီးကြောင့်.
2:7 ထို့နောက်အားလုံးအံ့ဩမိန်းမောခဲ့ကြ, သူတို့သိချင်, ဟုဆို: "အကယ်, ဂါလိလဲစကားပြောနေကြသည်သောဤသူအပေါငျးတို့သမဟုတ်ပါ?
2:8 ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနဲ့သူတို့ကိုတစ်ဦးချင်းစီကြားရပြီဖြစ်ပါတယ်, ကျွန်တော်မွေးဖွားခဲ့သည့်သို့?
2:9 Parthian နှင့်ဒေိနှင့် Elamite, နှင့်ပိုတေးမီးယားနေကြတဲ့သူတွေကို, ယုဒပြည်နှင့် Cappadocia, ပုန်တုပွညျနှင့်အာရှ,
2:10 Phrygia ပံဖုလိပြည်, အီဂျစ်နဲ့ကုရေနေပြည်သားန်းကျင်နေသောလစ်ဗျား၏အစိတ်အပိုင်းများ, ရောမနှင့်သစ်ကိုဆိုက်ရောက်,
2:11 ထိုနည်းတူယုဒလူတို့နှင့်အသစ်ပြောင်းလဲ, Cretans နှင့်အာရပ်: ငါတို့သည်ကိုယ်ဘာသာစကားများညျဘုရားသခငျ၏အားကြီးသောအကျင့်ကိုစကားပြောသူတို့ကိုကြားရပြီ။ "
2:12 And they were all astonished, သူတို့သိချင်, saying to one another: “But what does this mean?"
2:17 ‘And this shall be: in the last days, ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ, I will pour out, from my Spirit, upon all flesh. And your sons and your daughters shall prophesy. And your youths shall see visions, and your elders shall dream dreams.
2:18 သေချာပေါက်, upon my men and women servants in those days, I will pour out from my Spirit, and they shall prophesy.
2:21 နှင့်ဤဖြစ်ရကြလိမ့်မည်: whoever shall invoke the name of the Lord will be saved.’
2:26 ဒီအတွက်ကြောင့်, my heart has rejoiced, နှင့်ငါ့လျှာ exulted ထားပါတယ်. ထို့အပြင်, my flesh shall also rest in hope.
2:27 သငျသညျငရဲမှအကြှနျုပျ၏ဝိညာဉျကိုစွန့်ခွာမည်မဟုတ်များအတွက်, nor will you allow your Holy One to see corruption.
2:28 သငျသညျအကြှနျုပျကိုသိအသက်တာ၏နည်းလမ်းများရာ၌ခန့်ထားပြီ. You will completely fill me with happiness by your presence.’
2:30 ထို့ကြောင့်, he wasaprophet, for he knew that God had sworn an oath to him about the fruit of his loins, about the One who would sit upon his throne.
2:32 ထိုယရှေု, God raised up again, and of this we are all witnesses.
2:33 ထို့ကြောင့်, being exalted to the right hand of God, and having received from the Father the Promise of the Holy Spirit, he poured this out, just as you now see and hear.
2:36 ထို့ကြောင့်, may the entire house of Israel know most certainly that God has made this same Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ.”
2:38 သို့သျောလညျးကိုအမှန်တကယ်, Peter said to them: “Do penance; and be baptized, each one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of your sins. And you shall receive the gift of the Holy Spirit.
2:40 ပြီးနောက်, with very many other words, he testified and he exhorted them, ဟုဆို, “Save yourselves from this depraved generation.”
2:41 ထို့ကြောင့်, those who accepted his discourse were baptized. And about three thousand souls were added on that day.
2:43 And fear developed in every soul. လည်း, many miracles and signs were accomplished by the Apostles in Jerusalem. And there wasagreat awe in everyone.
2:46 လည်း, they continued, daily, to be of one accord in the temple and to break bread among the houses; and they took their meals with exultation and simplicity of heart,
ဒီဇင်ဘာလ 12, 2018
ဒီဇင်ဘာလ 11, 2018
ဒီဇင်ဘာလ 10, 2018
ဒီဇင်ဘာလ 9, 2018
ဒီဇင်ဘာလ 8, 2018